Kurumidza!!! GOG iri kupa SOMA yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
GOG irikupa mutambo wevhidhiyo SOMA muzvitoro zvavo zvepamhepo zveLinux, asi kupihwa kwacho kunongogara kwemaawa mashoma, saka kurumidza kuona kuti unowana kopi yako nenguva uye haufanire kubhadhara chero chinhu. Unogona kuwana iyi link kuti uwane kopi yako yemahara kubva kuSOMA yeLinux. Kwangosara maawa mashoma panguva yekuburitsa ichi chinyorwa, saka unofanirwa kukurumidza kana iwe ukaverenga idzi nhau kana uchazopinda mushure menguva yekupedzisira ...
Ichokwadi ndechekuti GOG iri kuita mushe maererano ne mitambo yemavhidhiyo uye rutsigiro rweLinux, saka yave kuita sarudzo yakanaka kana imwe nzira kuValve Steam chitoro. Isu tinotaurawo nezvekuzvininipisa pane dzimwe nguva, asi kune zvishoma. Nhau dzakanaka maererano neGNU / Linux-inotsigirwa mitambo yemavhidhiyo kazhinji inogara ichibva kuSteam neGOG. Naizvozvo, kune nzvimbo mbiri dzekufunga nezvadzo.
Kune avo vasingazive zita iri, iti iwo mutambo wevhidhiyo ine inonakidza mifananidzo uye a inotyisa nyaya zvinonakidza kwazvo. Inosanganisawo kupona munzvimbo iri pasi pegungwa, mune imwe nzvimbo inonzi PATHOS-II. Mutambi achasvika pachiteshi chiri mumatongo uye iwe uchakurumidza kuona kuti iboka renhepfenyuro dzakakomberedza North Atlantic kutumira zvinhu muchadenga. Mushure mekukanganiswa kwemeteorite, zvivakwa izvi zvakava nzvimbo yekutizira yevakapona vekupedzisira.
Asi ikozvino, chakavanzika chinoparadza nzvimbo idzi dzatinofanira kutsvaga, uye tichazviona izvozvo michina yatanga kukudziridza mavara evanhu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo vhidhiyo mutambo uye izvo zvawakaverenga zvakakunakidza iwe, iwe unotoziva kuti izvozvi kuGOG vanokupa iwe mahara. Usarasikirwa nechipo ichi chikuru, nekuti haugari uine zita rinonakidza zvakadaro pa € ​​0. Kumhanya !!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kurumidza!!! GOG iri kupa SOMA yeLinux
haina DRM, unogona here kusiya iyi link kuti uitore? handichatore kopi yangu yemahara, ndatenda!
Iyo itsva vhezheni yeRancherOS 1.5 inosvika nerutsigiro rukuru